Shir looga Hadlayo Hiigsiga 2016-ka oo ka Furmay Jabuuti – Radio Daljir
Diseembar 12, 2015 4:02 b 0
Somalia, December 12, 2015-(Daljir)_Somalia, December 12, 2015-(Daljir)_Shirkii Wada-tashi Hiigsiga 2016-ka ayaa maanta ka furmay Dalka Jabuuti, iyadoo ay ka Qayb-galayaan xubno ka socda Dowladda Somalia, maamul-goboleedyada iyo bulshada rayidka.
Kulankan ayaa lagu wadaa in looga hadlo qodobbo ay ka mid yihiin; hannaanka federaalka dalka, awood-qeybsiga siyaasadeed iyo wadaagga kheyraadka guud ee Somalia. Sidoo kale ergada ayaa waxay soo bandhigi doonaan qodobbo la doonayo in la is-waafajiyo, kuwaas oo ku saabsan nooca doorashooyinka ka dhici doona dalka marka la gaaro sannadka 2016-ka iyo mustaqbalka siyaasadeed ee dalka.
Sidoo kale, qodobbada looga doodi doono shirka ayaa waxaa ka mid ah qaabka lagu soo xuli doono xildhibaannada baarlamaanka soo socda ee DF Soomaaliya, iyadoo qodobbada laga soo saaro shirka lagu soo bandhigi doono shirka midkan xiga ee Muqdisho ka dhici doona.
Dhinaca kale, waxaa dib u dhacay shir maanta ka furmi lahaa Muqdisho oo ay isugu imaan lahaayeen madaxda dowladda federaalka, kuwa maamullada ka jira dalka, beesha caalamka iyo ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya.